Video na-egosi Xiaomi mpịachi mobile | Gam akporosis
Vidio na-egosi Xiaomi ekwupụta mpịachi mobile
Agha iji hụ onye bụ onye mepụtara na-ebupụta smartphone nwere nnukwu nha ihuenyo odi ka ogwusi na njedebe, ọ bụ ezie na anyị ka na-ahụ ụfọdụ ọdụ na ya. Ọdịnihu nke ụwa nke telephony dị na mpịachi ihuenyo. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa abụọ gara aga, Samsung kpughere ihe ga-abụ folda ekwentị ya, na-ezochi ọtụtụ atụmatụ ya maka ebumnuche doro anya.
Evan Blass, onye na-eri mmiri a maara nke ọma, anyị nwere ike ịkpọ ya onye isi nke ọtụtụ ndị na-emepụta ama ama, bipụtara vidiyo na akaụntụ Twitter ya, nke ọ na-ekwu na enweghị ike igosi na ọ bụ eziokwu, mana na ọ bụ ọnụ nke Xiaomi rụpụtara. Na vidiyo anyị na-ahụ mbadamba nkume nke na-abanye ịghọ smartphone.
Enweghị ike ikwu maka izi ezi nke vidiyo a ma ọ bụ ngwaọrụ a, mana ekwuru na ọ bụ Xiaomi mere ya, agwara m. Hot ọhụrụ ekwentị, ma ọ bụ gadget porn Deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F
Ọ bụghị oge mbụ ma ọ bụ na ọ gaghị abụ nke ikpeazụ na e bipụtara vidiyo nke ụdị a maka n'ikpeazụ bụrụ ụgha. Ebumnuche nke Samsung na Huawei ịmalite ịmalite mpịachi ekwentị amatala nke ọma, ebe ụlọ ọrụ Korea bụ ndị mbụ na-eweta ihe dika m kwuru n'elu.
Xiaomi nwere ike na-arụ ọrụ na mpaghara a ruo oge ụfọdụ, mana opekata mpe anyị anụbeghị banyere ya. Dị ka anyị nwere ike na vidiyo, mgbe ngwaọrụ ahụ meghere kpamkpam, ọ na-egosi anyị interface nke mbadamba. Mana mgbe apịaji, ọ naghị egosi interface nke ama.
Echiche ahụ adịghị njọ, mana ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na mgbe ọnụ ya na-apịaji, n'akụkụ ihuenyo na-anọ n'èzí, ntakịrị idobata na ya nwere ike imebi ulo oru mbo anyi tinyere onu. Na samsung nlereanya, na-egosi anyị ihe ngebichi na-agbanye n'ime ma nwee ihuenyo na mpụga, nke na-enye anyị ohere ịmekọrịta ngwaọrụ dịka a ga - asị na ọ bụ ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Vidio na-egosi Xiaomi ekwupụta mpịachi mobile
Mgbanwe na-agbanwe agbanwe na-eguzogide ọgwụ karị.
Apex Weather bụ ngwa ihu igwe ọzọ, mana sitere na ngwa ngwa ama ama